आइसीयु र भेन्टिलेटर पनि ब्ल्याकमा
सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिन्छ– आइसीयुको ९ लाख, भेन्टिलेटरको १५ लाख । राजधानीमा कोरोनाको महामारी फैलिएपछि कुनै पनि अस्पतालमा नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सकिदैन, बिरामी एकबाट अर्को अस्पताल दौडाएका दृश्य दैनिकी बनिसकेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय यो मान्न तैयार छैन । आइसीयु र भेन्टिलेटर छन् भन्छ, दिनहुँ बेभसाइटमा राखेको कुरा गर्छ, फोन ग¥यो कुनै पनि अस्पतालमा बेड छैन ।
बेड कुन अस्पतालमा खाली छ भनेर सोध्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका नम्बरहरु यिनै हुन् । डा.माधव ९८५१२३४२२९, डा.समिर ९८५१०५४६९९, डा. नवराज ९८४२०५४९३४, डा.कुम्बर ९८४२२९७३६७ ज्भयअ( ४२६९७३५, ४२५०८४५, ९८५१२५५८३९, ९८५१२५५८३७ । यी नम्बरहरु कि त उठ्दैनन्, कि व्यस्त हुन्छन् । कुनै कुनै उठ्छन्, बिरामीको नाम, ठेगाना लेख्यो, कतै खाली भएछ भने खबर गर्छौं भन्छन्, कुनै खबर आउँदैन । बिरामी अल्तल्ली सकेको हुन्छ ।
राजधानी हट स्पट बनिसकेको छ । कारोना नलागोस् भनेर सावधानी नअपनाउँदा महामारी फैलिएकोमा शंका छैन । तर, सावधानी अपनाउनेलाई पनि संक्रमण सरेको छ, सर्दा उपचार त चाहियो नि । सरकार भन्छ बेड छ, कहाँ छ बेड ?
राष्ट्रपतिलाई करोडौंको गलैंचा, मन्त्रीहरुलाई जिम हल, ओम्नीसँग कमिशन, नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अव १८ अर्वको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ बनाउन खर्च गर्दैछन् । यही हो नेकपाको दूरदृष्टि भनेको ? यस्तै सोचले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्छन् ? कि नेपाली कोरोनाको कहरबाट लाशमा परिणत हुन्छन् ? नेकपाका नेताहरु, होनहार युवा कार्यकर्ताहरु किन बोलिरहेका छैनन्, किन विवेकलाई नेताको साखुल्ले बन्नका लागि बन्दकी बनाइरहेका होलान ?
देशभक्त युवाहरुको कुनै कमी छैन । हरेक पार्टीभित्र होनहार युवाहरु प्रशस्तै छन्, तिनले अव बोल्नुपर्छ । देशलाई, परिवर्तनलाई राजनीतिक मनपरीतन्त्रको बन्दी बनाउने अवस्थामा बिद्रोह हुनसकेन भने मुलुक निरंकूशतन्त्रमा जानेछ ।
यतिबेला आमनागरिक लोकतन्त्रबाट राहत पाइन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा पाइन्छ भनेर पर्खिरहेका छन् । सरकार जनविरोधीजस्तो देखिएको छ । सरकारले जनअपेक्षा र जनस्वास्थ्यमा गर्नैपर्ने सेवा, सुविधा र सर्वसुलभ उपचार र भोकालाई खाना दिन सकेको छैन । युवाले यो जिम्मेवारी लिन अग्रसर हुनु जरुरी छ ।